WAWA oo Tababar u Qabatay Masuuliyiinta iyo Shacabka Degmada Carmo [SAWIRRO] | SAHAN ONLINE
WAWA oo Tababar u Qabatay Masuuliyiinta iyo Shacabka Degmada Carmo [SAWIRRO]
BOOSAASO –Dallada u heelanayaasha Haweenka ayaa magaalada Bosaso ku qabatay Tababar la xiriiray islaxisaabtanka maamulka degmooyinka iyo shacabka ee degmada Carmo ee Gobolka Bari
Tababarkan oo ay soo qabanqaabiyay Dallada WAWA, Waxaa ka qaybgalay maamulka degmada Carmo iyo qaar ka mid ah shacabka carmo iyo tuulooyiinka hoostaga degmadaasi, waxaa kaloo ka qaybgalay Masuuliyiinta gobolka Bari.
Saynab X. Ayaanle Axmed oo ka tirsan madaxa Dallada WAWA, oo ugu horrayn furtay tababarka Waxay faahfaahin ka bixisay ujeedada Tababarka.
“ Shacabka waxaa la barayaa sidii ay ula xisaabtami lahaayeen maamulkooda, sidii ay u dooran lahaayeen iyo sidii ay u hormarin lahaayeen degmadooda, waxaana mashruucan bixisay hay’ada Diakonia.shacabku waxay soo doorteen guddiga la xisaabtama maamulkooda” ayay tiri Saynab Ayaanle.
Guddoomiye K/xigeenka Degmada Carmo Siciid C/raxmaan Qablan iyo Agaasimaha arrimaha bulshada ee degmada Maxamed Siciid ayaa dhinacooda sheegay in maamulka degmada iyo shacabka ay wadashaqayn dhow wada leeyihiin, diyaarna ay u yihiin la xisaabtan.
Guddoomiyaha Gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo tababarka furay, waxaa uu boggaadiyay Dallada WAWA iyo hay’adaha gacanta ka gaystay mashruuca.
dhinaca kale, Dallada WAWA waxay sidoo kale ku qabatay Bosaso dood furan oo la xiriirta waxbarashada madaniga ah. Dooda ayaa dhexmaray maamulka degmada Carmo iyo shacabka 9 tuulo oo hoos tega degmadda.